मिलनको अर्को प्रेमकथा ‘बोबी’ को टिजर सार्वजनिक
काठमाडौं । पछिल्लो समयका नेपालका एक खप्पीस निर्देशकका रुपमा चर्चामा आउन थालेका मिलन चाम्स निकै खारिएका निर्देशनका रुपमा चिनिन्छन।
मिलनले निर्देशन गरेका चलचित्रका टिजर, ट्रेलर र गीत अहिले एकपछि अर्को लगातार सार्वजनिक तथा चलचित्र प्रर्दशनमा आईरहेका छन् । मिलन आफै कुन चलचित्र कहिले रिलिज गर्ने दोधारमा छन् ।मिलन निर्देशित चलचित्र ‘लिलिबिली’ चैत्र ३० गतेबाट रिलिज हुने भएको छ । यसका लागी अहिले निर्माण टिम प्रचार प्रसारमा जुटेको छ । उता मिलन आफैले निर्देशन गरेको अर्को नेपाली चलचित्र ‘ह्याप्पी डेज’को प्रदर्शन मिति परिवर्तन भईरहेको छ ।
यसै शिलशिलामा मिलनको अर्को चलचित्र ‘बोबी’ को टिजर पनि सार्वजनिक भएको छ । भर्खरै मात्र एक दृश्टीविहिन रहेकि सृष्टी केसिको वायोपिक कथा ब्ल्याईन्ड रक्स प्रस्तुत गरेका उनले एक वास्तविक प्रेम जोडिको प्रेमकथालार्इ पर्दामा उतार्न हर प्रयास गरेका छन् । नर्वेमा बस्दै आएका रियल जोडी कविता गुरुङ र उमेश थापाको जीवनको संघर्ष, प्रेम, सफलताको कथालाई ‘बोबी’मा प्रस्तुत गरिएको छ । विजय लामा, रुवि राणा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
चाम्स इन्टरटेन्मेन्ट र लण्डन आई इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रमा नरेश भट्टराइको कथा, नवराज कृष्ण थापाको छायांकन, अर्जुन जीसीको सम्पादन, ताराप्रकाश लिम्बुको संगीत छ । तर लगातार चलचित्र प्रर्दशनमा आएका बेला भएरै होला उक्त चलचित्रको प्रदर्शन मिति भने तय गरिएको छैन ।
प्रकाशित : आइतबार, फागुन २७, २०७४१४:४३
आलुको बीउ उत्पादन!
नेहा शर्माको यो विवादित तस्बिर भईरहेको थियो भाइरल, आफैले दिनु पर्यो यस्तो सफाई
नेपाली नायक सागर तिवारीको बलिउड यात्रा, यस्तो रह्यो पहिलो भिडियो!
पूरै नेपाल हिउँमय, प्रधानमन्त्री ओली पुगेको ठाउँ पनि हिउँमय ! [स्वीटजरल्याण्डका तस्विर सहित]
मौसम बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना ! यस्तो छ मौसम अनुमान !